Shiinaha Gawaarida EPP / ETPU / EPO Soosaarayaasha iyo Shirkadaha | Welleps
Mashiinka wax taaj oo kale ah qaab EPP
Dhismaha birta adag oo lagu farsameeyay qaboojinta heerkulka sare, daaweynta kuleylka, dusha sare ee qolalka sandblast oo lagu buufiyay rinjiga anti-corrosive.
Nidaamka xakamaynta wuxuu kobciyaa Japan PLC iyo shaashadda taabashada Ingiriisiga ee hawlgalka fudud iyo soosaarida si toos ah otomaatig ah.
Qaybo mashiinno tayo sare leh oo xasilloon, sida Jarmal Burkert waalka-kursiga fuula.
Kaydinta tamarta iyada oo loo eegayo cabbirka mashiinka si fiican loo qaabeeyey, khadadka tuubbada si loo ogaado cadaadiska uumiga ee degdegga ah ee sii kordhaya iyo hoos u dhaca.
Gawaarida sare ee hidda-socodka ee leh laba-cirifoodka korantada, taas oo ka dhigaysa mashiinka si joogto ah u shaqeynaya oo si adag u xirmaya.
Mashiinka waxaa lagu qalabeyn karaa nidaam faaruq ah oo lagu dhisi karo, sidoo kale waxaa jira marin loo helo nidaamka faaruqinta xarunta.
Qolka quudinta laba jeer ee quudinta dhakhsaha leh si loo soo gaabiyo waqtiga wareegga.
Balance balanka xakamaynta uumiga xasiloon.
Lugaha mashiinka dahaarka leh ee zinc la dheereeyey ayaa ikhtiyaari u ah macaamilka inuu ku rakibo mashiinka dhulka khaaska ah.
Lugaha mashiinka iyo mashiinku waa ikhtiyaari.
EPP (Balaariyay Polypropylene) 即 高 发泡 聚丙烯 ， 是 / 气体 复合 材料 以其 独特 独特 而 优越 的 的 目前
能量 吸收: 由于 EPP 制品 具有 特殊 的 泡 孔 结构, 其 通过 泡 孔 中 的 气体 滞留 和 压缩 作用 来 吸收 逸散 能量, 具有 优异 的 抗压 性能
循环 使用 ： EPP 制品 柔韧 性 好 ， 可 反复 使用 ， 不易不易
EPP (Balaariyay Polypropylene) waa nooc ka mid ah waxqabadka sare ee polymer / gaaska walxaha isku dhafan, oo leh waxqabad aad u fiican si uu u noqdo kan ugu dhow ee sii kordhaya ilaalinta deegaanka iyo qalabka dahaarka.
Waxqabadka ugu weyn
Nuugista tamarta: maxaa yeelay alaabada EPP waxay leeyihiin qaab dhismeedka xumbo khaas ah, waxay ka soo jiidan kartaa tamarta banaanka si hufan, waxayna si fiican u diidi kartaa saxaafadda.
Dib-u-warshadaynta: Alaabada EPP dabacsanaan wanaagsan ayaa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah, oo aan si fudud loo jabin.
Alaabada EPP oo si ballaaran loogu adeegsado warshadaha gawaarida, sida gawaarida gawaarida, gawaarida gawaarida gawaarida, albaabka, kursiga gaariga ee amniga, iwm.
HAWLAHA UGU WEYN EE MAKIINADAN
Si aad ula jaanqaado wax soo saarka kala duwan, mashiinkan cirbadeynta wuxuu leeyahay kaladuwanaansho ballaaran oo saxan caaryo ah, min, cabirkiisu waa qiyaastii 600 × 800 mm iyo ugu badnaan. Cabbirku waa ilaa 1200 × 1400 mm. Mashiinkaan waxaa lagu qalabeeyaa laba-talaabo nidaamka haydarka, nidaamka quudinta oo la cadaadiyo, iyo nidaamka tamarta dhexe, qaska gargaarka, haanta biyaha ee cadaadiska haysa, nidaamka uumiga, nidaamka kumbuyuutarka lagu xakameeyo, nidaamka xakamaynta nidaamka dhijitaalka ah iyo qolka uumiga.
Nidaamkani uma baahna wax saliid ah. Tilmaamaha Haydarooliga waxaa lagu rakibay labada dhinac ee masiibada iyada oo xitaa xoog isku haysa caaryada. Qulqulka qallalan ayaa hayn kara kuleylka. Furitaanka caaryada iyo xirida caaryada waxaa maamula nidaamka kombiyuutarka kaas oo hubin kara saxnaanta quudinta ugu fiican. Dhaqdhaqaaqa ka saarida caaryada waxaa xakameynaya nidaamka soo saarida si loo bixiyo tayada ugu fiican ee sheyga saxda ah inta lagu gudajiro nidaamka ejection.
Mashiinkan waxaa loogu talagalay inuu ahaado meel bannaan oo saddex-cabbir ah. Naqshaddan bannaan waxay naqshadeyn doontaa hannaanka beddelaadda caaryada, hawlwadeennaduna waxay ka beddeli karaan caaryada hore, gadaal iyo labada dhinac ee mashiinkan. Sidoo kale, mashiinkan si toos ah ayaa dhulka loo dhigi karaa iyada oo aan la dhigin wax madal ah. Si loo sugo nabadgelyada wadayaasha, mashiinkan waxaa lagu qalabeeyaa albaabka amniga iyo nidaamka amniga.
Caaryadan waxaa lagu sameeyaa qaab saxan oo saddex qaybood ah. Tamar badan ayaa la keydin karaa iyada oo aan la xukumin sidaa darteedna, saxanka caaryada ayaa si aad ah looga faa'iideysan karaa. Biinanka hoggaamiyaha iyo qoriga buufinta ayaa lagu rakibay gudaha taarikada dhaqaaqa si loo hubiyo amniga hawlgalka. Si loo yareeyo waqtiga sanamyada, nidaamkani wuxuu si dhakhso leh u rakibayaa caaryada iyo nidaamka beddelaya.
Nidaamka Haydarooliga ee laba-tallaabada ah wuxuu siiyaa laba xawaare (dhakhso iyo gaabis ah) ikhtiyaarrada caaryada-xiridda iyo furitaanka. Sidoo kale, waqtiga wax-qabadka waa la dhimay.
NIDAAMKA Tamarta DHEXE
Mashiinkaani wuxuu leeyahay hal nidaam buuxa oo nidaamka tamarta dhexe ah oo ay soo saarto shirkadeena Dhammaan uumiga iyo hawada loo baahan yahay inta lagu gudajiro nidaamka duritaanka waxaa xakameynaya qalabka tamarta dhexe. Nidaamkani wuxuu bixin doonaa xitaa hawo qaadashada oo si fudud ayaa loo hagaajin karaa. Nidaamkan uumiga ee cadaadiska hooseeya waxaa loogu talagalay tuubooyin balaaran iyo fallaadho kuwaas oo bixin kara xaalada shaqada ugu fiican
QAAR KA TIRSAN CAAFIMAADKA
Isku hagaajinta cadaadiska tamarta aad ayey muhiim u tahay. Cadaadiska uumiga ee sareeya, waqtiga waxsoosaarka waa la dheereynayaa wuxuuna cuni doonaa tamar badan. Si kastaba ha noqotee, badeecada ugu dambeysa ayaa laga yaabaa inay is bedesho oo muuqaalka kore ee badeecada ayaa saameyn ku yeelan kara marka cadaadiska uu aad u hooseeyo. Damjiraha gargaarka ayaa shaqeynaya marka la sii daayo caaryada iyo kululeynta caaryada. Hawada la cadaadiyey ayaa loo isticmaalaa buuxinteeda oo qoyaankani wuxuu yareynayaa isticmaalka tamarta wuxuuna bixin doonaa wax soo saar tayo sare leh.
HALKA BIYAHA CADAAD-SAARKA
Mashiinnada waxaa lagu qalabeeyaa hal set oo ah hanka biyaha cadaadiya ee haysta laba nooc oo kala duwan oo loogu talagalay qaboojinta biyaha iyo isku-dhafka.
Nidaamka faakiyuumku wuxuu ku qalabeysan yahay Qalabka dareeraha dareeraha ee dareeraha ah iyo hawo-mareenka kaas oo bixiya faaruq hufan. Iyadoo aan lahayn talaabo dheeraad ah oo lagu qalajiyo, waxaan dedejin karnaa cirbadeynta nidaamka faakiyuumkan. Ka saarida caaryadu waa fududahay in la dhammaystiro sidoo kale waxay keydisaa tamar badan.
NIDAAMKA KOMBUUTARKA LOO XADHIRAY
Mashiinka cirbadeynta waxaa lagu qalabeeyaa nidaam kumbuyuutar lagu xakameeyo kaasoo leh shaqooyinka tifaftiraha iyo ballaarinta. tillaabo kasta oo hawlgal ah waxaa si sax ah u hoos timaada nidaamkan kombiyuutarka ogaanshaha qaladka tilmaamahana waxaa lagu soo bandhigayaa shaashadda Nooc walba waxaa lagu dhejiyaa nidaamkan xisaabinta kaas oo soo bandhigaya habraacyada, dejinta waqtiga iyo mudnaanta xakamaynta cadaadiska cadaadiska.
Waxaan u qaabeyn karnaa mashiinka si waafaqsan faahfaahinta macaamiisha.
Hore: Auto Qaab Mashiinka wax taaj oo kale Vacuum
Xiga: EPP (Balaariyay Polypropylene)